दुई तिहाईको दम्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले अतिबादको शुरुवात गरे: प्रदीप पौडेल – Online National Network
दुई तिहाईको दम्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले अतिबादको शुरुवात गरे: प्रदीप पौडेल
२४ असार २०७५, आईतवार ०६:४५
असार, २४ बुटवल – नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य प्रदीप पौडेलले प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई तिहाईको दम्भ बोकेर अतिवादको सुरुवात गरेको आरोप लगाएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा किन दुइतिहाइको दम्भ चाहिएको हो भन्दै उनले प्रश्न गरे ।
देश राजनीतिक दलका भर्ती केन्द्र बनाउनको लागि ओलीले एकाधिकारबाद र निरकुंशताको बाटोमा हिडेको पौडेलको तर्क छ । प्रधानमन्त्रीले देशलाई कम्बोडीया बनाउन लागेको उनको आरोप छ । उनले भने—‘ सरकारले पछिल्लो समयमा गर्दै आएका विभिन्न कार्यहरुले यस कुरालाई पुस्टी गरेको छ’ ।
आफ्नो सम्बोधनको अधिकांश समय प्रधानमन्त्रीमाथि खनिन खर्च गरेका उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई घुडा टेकाएर छोड्ने उद्घोष समेत गरे । ‘ सरकारले निशेधित क्षेत्र किन तोक्ने, जनता सडकमा आउदा प्रधानमन्त्रीलार्इ रेल ल्याउन, ग्यासका चुला घरघरमा पुर्याउन, पानी जहाज ल्याउन कस्ले रोक्छ र ?,
हिजो माओबादीलार्इ जंगलमा बसेर आन्दोलन नगर, राजधानी आउन भनेर कांग्रेसले राजधानीमा बोलाएको स्मरण गर्दै अहिले सरकारले गलत काम गर्दा जनता सडकमा जनता जान नपाउने ?’
प्रधानमन्त्रीलाई अतिवाद लाद्न नदिने बताउदै नेता पौडेलले अव गाली गरेर देश विकास नहुने बताए । प्रधानमन्त्रीले भोलीको कार्यक्रममा कांग्रसलाइ के भनेर गाली गर्ने भनेर राती २ बजेसम्म नसुत्ने गरेको आफुले सुनेको उनले बताए । उनले ओलीलाइ जनताले कांग्रेसलार्इ गाली गर्न मात्र प्रधानमन्त्री नबनाएको बताए ।
विकृतीको विरुद्वमा आवाज उठाएका डा गोविन्द केसीको माग सम्बोधनमा सरकारको ध्यान नगएको प्रति उनले स्वाथ्यमा सबैको पहुँच स्थापना गर्नको लागि केसीको माग जायज भएकोले तत्काल माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
राज्य राजधानीमा मात्रै भएको व्याक्तिको लागि नभएको तर्क गर्दे उनले विभिन्न खाले समस्या समाधानको लागि डा. केसीको माग जाहेज र ठिक भएको बताए । ‘दूई तिहाई भएको व्याक्ति के राजा हो ?
दुई तिहाईको अगाडी गोविन्द केसीको केही नभएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लाई दुई तिहाई भएको व्याक्ति राजा नभएको तर्क गरे । उनले भने–‘दूई तिहाई भएको व्याक्ति के राजा हो ? उसलाई कानुन लाग्दैन, के उ कानुन भन्दा माथि हो ? ” संघीयताको खास विरोधी केपी ओली नै नेपाल पहिलो विश्वमा प्रवेश गरेको समाचार सुन्न आतुर रहेको भन्दै उनले देश विकासमा लाग्नको लागि ओलीलाई आग्रह गरे ।
संघीयताको खास विरोधीको रुपमा केपी ओली रहेको आरोप लगाउदै उनले बाहिरी रुपमा मात्रै ओलीले संघीयताको सर्मथन गरेको बताए । संघीयतामा जम्मा ७ प्रतिशत मात्रै बजेट आएको भन्दै उनले बास्तविक संघीयता बलियो हुन नसक्ने थुर्पै आधारहरु देखा परेको बताए ।
नेपालको व्युरोक्रेसी विस्तारै एकात्मक शासन तर्फ धकिलियोको उनको तर्क छ । उनले भने–‘ विस्तारै संघीयतालाई धकेलेर एकात्मकतर्फ लैजाने सडयन्त्र भएको छ । ’ नेपालमा ३० लाखले के रेल आउछ ?’ ओलीले चिनबाट आउदा रेल ल्याउने कुरा गरेको भन्दै उनले ३० लाख ले रेल नआउने बताए । उनले भने–“ नेपालमा ३० लाखले के रेल आउछ ?’
ओलीलाई समयमै सच्चीनको लागि पटक पटक आग्रह गरेको जानकारी दिदै उनले यदि नसच्चीएमा सडक सडदमा समेत निरन्तर आवाज उठाउने समेत बताए । ओलीले नेपाललाई कम्बोडिया बनाउन खोजेको उनको आरोप छ । नियोजित रुपमा नै केपी ओली नै यसमा उद्धत रहेको उनले आरोप छ ।
‘प्रमको कुर्चिमा बसेर देश एकता खल्बलाउने प्रयास गरेको भन्दै ओली अतिवाद तर्फ लम्कीदै गएकोको कारण अव विरोध उनको गर्नुको विकल्प छैन ’। पौडेलले भने । नेपालको राजनीति अहिले जे नहोस् भनेका थियौं तर त्यहि मोडमा पुगेको भन्दै पौडेलले गंगामायालाइ न्याय दिन सरकारलाइ आग्रह गरे ।
देउवा सरकारले गरेको चुनाबबाट ओली प्रधानमन्त्री बनेको स्मरण गराउदै पौडेलले देउवा सरकारका नियुक्ती बदर गर्नु लज्जास्पद काम भएको टीप्पणी गरे । ७ वटै मुख्यमन्त्री पनि अबैध हुनुपर्यो नी ? ‘देउवाले गराएको चुनाबबाट आफै प्रधानमन्त्री बन्ने, सातवटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हटाउने कुरा सुन्दैछु, तीनीहरुबाट सपथ खाएका मुख्यमन्त्री पनि त्यसो भए अबैध हुनुपर्यो नी ?
उनको प्रश्न छ संबैधानिक नियुक्तिका कतिपय जांज पास गरेर जिम्मेबारीमा पुगेकाहरुलाइ पनि हटाउनु गैर संम्बैधानिक कुरा भएको उनले प्रष्ट पारे । सबैकुरा राजनीतिक ढंगले हेरिनुनहुने उनको भनाइ छ । प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति मानिदैन, नेपाललाई प्रयोगशाला बन्न दिइन्न प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डबाट आएको भन्दै उनले अब देशलाइ प्रयोगशाला बन्न नदिने ठोकुवा गरे ।
‘त्यो व्यवस्था के को लागि त्यो चाहियो ? के नेपाल प्रयोगशाला हो ? नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउनबाट रोक्नुपर्दछ । ’ कांग्रेस अतिवादको विपक्षमा एक ढिक्का भएर अगाडी बढ्छ नेपाली काग्रेसका युवा नेता समेत रहेका उनले कांग्रेस अव नया ढंगले अगाडी बढ्ने उल्लेख गरे ।
पौडेलले भने—‘हामीभित्र पनि केहि कमि कमजोरी रहेपनि त्यो सच्चाउदै अव दरिलो ढंगले न्यायको पक्षमा, अतिवादको विपक्षमा अगाडी बढ्छौं । ’ कांग्रेसभित्र आन्तरिक रुपमा सुधारको योजना अगाडी बढाउने भन्दै उनले भने—‘अहिले प्रतिपक्षको भुमिका शसक्त बनाउनको लागि नै हाम्रो ध्यान केन्द्रीत छ । ’
कांग्रेस सभापति देउवा बिधान बिपरित चले कांग्रेस सभापति देउवालाइ बिधान बिपरित चलेको भन्दै उनले बिधानलाइ टेकेर अघि बढ्न सुझाब समेत दिए । नेपाली काग्रेसले प्युठानबाट नयां अभियान थालेको बताउदै नेता पौडेलले विगतका ईतिहासलाई टेकेर अगाडी बढनुको विकल्प नभएको बताए ।